မီးကွင်း- ၎င်းသည် အဘယ်အရာ၊ လက္ခဏာများ၊ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အခြားအရာများ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 06/01/2022 10:00 | ဘူမိဗေဒ
ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် အချို့သောနေရာများသည် အခြားနေရာများထက် အန္တရာယ်များသောကြောင့် ဤနေရာများ၏အမည်များသည် ပို၍ထင်ရှားပြီး ဤအမည်များသည် ပို၍အန္တရာယ်ရှိသောအရာများကို ရည်ညွှန်းသည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ပြောရတော့မယ်။ မီးကွင်း ပစိဖိတ်ဒေသမှ ဤအမည်သည် ငလျင်လှုပ်ခြင်းနှင့် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် ဤသမုဒ္ဒရာဝန်းကျင်ဧရိယာကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ Ring of Fire တည်ရှိရာနေရာနဲ့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေကို သိထားရမယ့်အရာအားလုံးကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
3 မီးကွင်း၏ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု
4 ဖြတ်သန်းတဲ့ နိုင်ငံတွေပါ။
စက်ဝိုင်းဧရိယာထက် မြင်းခွာပုံသဏ္ဍာန်တွင် ငလျင်နှင့် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု အများအပြားကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဤသည်မှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဧရိယာကို ပို၍ အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ဤကွင်းသည် နယူးဇီလန်မှ တောင်အမေရိက၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံးအထိ ဖြန့်ကျက်၊ စုစုပေါင်း အရှည် ကီလိုမီတာ ၄၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အရှေ့အာရှနှင့် အလာစကာ၏ ကမ်းရိုးတန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ကာ မြောက်နှင့် အလယ်ပိုင်းအမေရိက၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ပိုင်းကိုဖြတ်သွားပါသည်။
Plate tectonics တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဤခါးပတ်သည် ပစိဖိတ်ပန်းကန်ပြားဟုခေါ်သည့် အပေါ်ယံလွှာကိုဖွဲ့စည်းသည့် အခြားသေးငယ်သော tectonic plates များနှင့် အတူရှိနေသော အစွန်းကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။ ငလျင်နှင့် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့် ဧရိယာအဖြစ် ၎င်းကို အန္တရာယ်ဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
ပစိဖိတ်မီးကွင်းကို tectonic plates တွေရဲ့ ရွေ့လျားမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ပန်းကန်ပြားများသည် ပုံသေမဟုတ်သော်လည်း အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေပါသည်။ ဤသည်မှာ အင်္ကျီအတွင်း၌ ချည်မျှင်ဓာတ်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်း၏သိပ်သည်းဆကွာခြားမှုသည် ၎င်းတို့ကို ရွေ့လျားစေပြီး tectonic plates များကို ရွေ့လျားစေသည်။ ဤနည်းဖြင့် တစ်နှစ်လျှင် စင်တီမီတာ အနည်းငယ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ရရှိသည်။ လူသားစကေးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သတိမထားမိသော်လည်း ဘူမိဗေဒအချိန်ကို အကဲဖြတ်ပါက ၎င်းသည် ပေါ်လာပါသည်။
နှစ်သန်းပေါင်းများစွာကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဤပန်းကန်ပြားများ၏ ရွေ့လျားမှုသည် ပစိဖိတ်မီးကွင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ Tectonic plates များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးလုံးမညီညွတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကြားတွင် နေရာလွတ်များရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အများအားဖြင့် ကီလိုမီတာ 80 ခန့် အထူရှိပြီး အထက်ဖော်ပြပါ အင်္ကျီတွင် ချည်မျှင်ဖြင့် ရွေ့လျားကြသည်။
ဤပန်းကန်ပြားများ ရွေ့လျားသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ကွဲထွက်ပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်မိတတ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ သိပ်သည်းဆပေါ်မူတည်၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နစ်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်များ၏ သိပ်သည်းဆသည် တိုက်ကြီးပန်းကန်များထက် ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် ပန်းကန်ပြားနှစ်ချပ် ထိပ်တိုက်မိသောအခါ အခြားပန်းကန်ပြား၏ ရှေ့သို့ ငုပ်သွားကြသည်။ ပန်းကန်ပြားများ၏ ရွေ့လျားမှုနှင့် တိုက်မိမှုသည် ပန်းကန်ပြားများ၏ အစွန်းများတွင် အားကောင်းသည့် ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာများသည် အထူးတက်ကြွသည်ဟု ယူဆကြသည်။
ပေါင်းစည်းကန့်သတ်ချက်. ဤကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင် တီတိုနစ်အပြားများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု တိုက်မိသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုလေးသောပန်းကန်ပြားကို ပေါ့ပါးသောပန်းကန်နှင့် တိုက်မိစေနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် subduction zone ဟုခေါ်တွင်သည်။ ပန်းကန်ပြားတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုအပေါ်သို့ စုပ်ယူသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဤနေရာများတွင် မီးတောင်များ အများအပြား ရှိနေသည် ၊ အကြောင်းမှာ အဆိုပါ ပြိုကျမှုသည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာမှ magma များ တက်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သိသာပါတယ်၊ ဒါက တခဏအတွင်းမှာ ဖြစ်မလာပါဘူး။ ဒါဟာ နှစ်ဘီလီယံချီကြာတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါ။ ဤသည်မှာ မီးတောင်အကွေ့များ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ။
မတူကွဲပြားကန့်သတ်။ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစည်းခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဤပန်းကန်ပြားများအကြား၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သူတို့သည် အနည်းငယ်ပို၍ ခွဲထွက်ပြီး ပင်လယ်မျက်နှာပြင်သစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ပြောင်းလဲရေးကန့်သတ်. ဤအတားအဆီးများတွင်၊ ပန်းကန်ပြားများကို ခွဲခြားထားခြင်း သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည် အပြိုင် သို့မဟုတ် အလျားလိုက် လျှောကျရုံသာဖြစ်သည်။
အစက်အပြောက် ၎င်းတို့သည် ပန်းကန်ပြားအောက်ရှိ အကျီအောက်ရှိ ၀တ်ရုံ၏ အပူချိန်သည် အခြားဒေသများထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဒေသများဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင် မှိုပူများသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ တက်လာနိုင်ပြီး ပိုမိုတက်ကြွသော မီးတောင်များ ထွက်လာနိုင်သည်။
Plate boundaries သည် ဘူမိဗေဒနှင့် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကို အာရုံစိုက်သည့်နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤမျှလောက်များသော မီးတောင်များနှင့် ငလျင်များသည် ပစိဖိတ်မီးကွင်းတွင် စုစည်းနေသည်မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာက ပင်လယ်ထဲမှာ ငလျင်လှုပ်ပြီး ဆူနာမီနဲ့ ဆူနာမီလှိုင်းတွေ ကြုံရတဲ့အခါပါ။ အဆိုပါအခြေအနေများအောက်တွင်၊ 2011 ခုနှစ်တွင် Fukushima ကဲ့သို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အန္တရာယ်အထိတိုးလာလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မီးတောင်များ ပျံ့နှံ့မှု မညီမညာဖြစ်နေသည်ကို သင်သတိပြုမိပေမည်။ တော်တော်ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကြီးမားသော ဘူမိဗေဒလှုပ်ရှားမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီလို လှုပ်ရှားမှုမရှိရင် မီးတောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မြေငလျင်များသည် ပန်းကန်ပြားများကြားတွင် စုစည်းမှုနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤငလျင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစိဖိတ်မီးကွင်းနိုင်ငံများတွင် ပို၍အဖြစ်များပါသည်။
ဒါကဒါပါ Ring of Fire သည် ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံး၏ လှုပ်ရှားနေသော မီးတောင်များ၏ 75% ကို စုစည်းပေးသည့် အရာဖြစ်သည်။ ငလျင်၏ 90% သည်လည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော ကျွန်းများနှင့် ကျွန်းစုများအပြင် မတူညီသော မီးတောင်များ အတူတကွ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲလျက်ရှိပါသည်။ မီးတောင်ခုံးများသည်လည်း အလွန်အဖြစ်များသည်။ ၎င်းတို့သည် subduction plates ၏ထိပ်တွင်ရှိသော မီးတောင်များ၏ကွင်းဆက်များဖြစ်သည်။
ဤအချက်က ဤမီးဇုန်ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများစွာကို စွဲလန်းပြီး ထိတ်လန့်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ စွမ်းအားသည် ကြီးမားပြီး အမှန်တကယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤကျယ်ပြန့်သော တိပ်ထုကွင်းဆက်သည် မြောက်အမေရိက၊ ဗဟိုအမေရိက၊ တောင်အမေရိက၊ အာရှနှင့် သမုဒ္ဒရာပိုင်းဒေသ လေးခုကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
မြောက်အမေရိက: ၎င်းသည် မက္ကဆီကို၊ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့၏ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်တွင် လည်ပတ်ကာ အလက်စကာသို့ ဆက်လက်လည်ပတ်ကာ မြောက်ပစိဖိတ်ဒေသတွင် အာရှတိုက်သို့ လည်ပတ်သည်။
အမေရိကအလယ်ပိုင်း: ပနားမား၊ ကော်စတာရီကာ၊ နီကာရာဂွာ၊ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဂွာတီမာလာနှင့် ဘီလီဇ်တို့၏ နယ်မြေများ ပါဝင်သည်။
တောင်အမေရိက: ဤနယ်မြေတွင် ချီလီနိုင်ငံနှင့် အာဂျင်တီးနား၊ ပီရူး၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ အီကွေဒေါနှင့် ကိုလံဘီယာ၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးနီးပါးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။
အာရှ: ရုရှားနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းကို ဖုံးလွှမ်းထားပြီး အခြားအာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဂျပန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကို ဖြတ်သန်းလျက်ရှိသည်။
Oceania- ဆော်လမွန်ကျွန်းစုများ၊ တူဗာလူ၊ ဆာမိုအာနှင့် နယူးဇီလန်တို့သည် မီးကွင်းတည်ရှိသည့် Oceania ရှိ နိုင်ငံများဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ပစိဖိတ်မီးကွင်း၊ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » မီးကွင်း